IZBAN-Metro Nyefee Hilal Station Na-enye Nnukwu Nkasi Obi | RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Aegean35 IzmirIZBAN-Metro Transfer Hilal Station ga-enye nkasi obi dị ukwuu
06 / 06 / 2012 35 Izmir, Ụgbọ okporo ígwè, ỤWA, ụgbọ okporo ígwè, General, Isi akụkọ, Turkey
İzmir Metropolitan Municipality sign a contract for Hilal Transfer Station nke ga-enye nkasi obi dị ukwuu na İZBAN-Metro nyefee na ụzọ ọhụrụ ụzọ mgbapụ maka Heroes-Akıncılar.
Izmir Suburban System, ọrụ ụgbọ njem kachasị elu na akụkọ ntolite nke Republic na-agba ọsọ Ọ bụ ezie na ụgbọ elu nke Ịntanet na-aga n'ihu ruo ihe karịrị otu afọ, a na-ahazi akara ahụ maka mkpa ọhụrụ. N'ebe a, İzmir Metropolitan Municipality kwubiri obi ebere maka ịnyefe ọdụ ụgbọ okporo ígwè ahụ na Hilal, Kahramanlar Akıncılar n'okporo ụzọ awara awara ma banye nkwekọrịta ma wepụta ebe ahụ. Site na Hilal Nyefee ebe a ga-ewu n'ime ebe a, a ga-enye ndị ọrụ İZBAN na ndị Metro ọwa ụgbọ elu nke abụọ. Nke a ga - eme ka njem oge dị mkpirikpi. Ekele maka ebe a na-enyefefe ebe a na-enyefe ebe a ga-ejikọta ya na Hilal Metro Station, njupụta nke ndị njem ga-ebelata nke ukwuu n'ihi ntụgharị nke İZBAN na Metro na Halkapınar Transfer Station.
Mgbe ndokwa ọhụrụ ahụ, ebe Hilal Suburban Station ga-arụ ọrụ, dị ka Halkapınar, ndị njem na-abịa site na Üçyol site na metro agaghị abanye Alsancak ka ha wee banye na İZBAN na ntụziaka nke Menderes. Ndị njem si Menderes ga-enwe ike ịga Üçyol site na ịkwaga n'okporo ụzọ site na iji Hilal Transfer Station na-abanye na Alsancak. Ebe ngbanwe nke İzmir Metropolitan Municipality na Hilal ga-enye nnukwu enyemaka na ụgbọ okporo ígwè.
N'aka nke ọzọ, n'okpuru Izmir Suburban System na usoro nke nchekwa na nchebe nke ụmụ amaala na-emechibido ruo n'ókè ebe a ga-agafe ebe ndị Heroes-Akincilar gafere. Ugbo ala na ụmụ amaala bi n'ógbè ahụ ga-eji ihe omume a maka crossings. A ga-arụ ọrụ ụlọ ọrụ abụọ ndị a dị mkpa nke obodo Izmir Metropolitan na 300 ụbọchị.
Obodo Ankara na-anaghị akwụsị akwụsị anọwo na-eche afọ…
Ndị ụkọchukwu nwere afọ ojuju
Ụgbọ okporo ígwè ga-eme nnukwu onyinye maka azụmahịa na Samsun
A ga-eme 3 na Istanbul. ụgbọ okporo ígwè na ụgbọ okporo ígwè ngwa ngwa n'ọdụ ụgbọelu
Estram na-emebi emebi!